General magetsi Vagadziri & Vatengesi | China General kuvhenekesa Fekitori
DC akatungamirira Module
Chigadzirwa Tsananguro ShineOn's AC mwenje module zvigadzirwa zvakavakirwa pane yavo IC drive mhinduro. Iwo mafomu echigadzirwa anosanganisira akajairwa SMD DOB zvigadzirwa, AC-COB akateedzana chigadzirwa akateedzana. Uchishandisa Linear drive scheme, ine dimmable, yakaderera frequency flash hunhu poindi. Iyo AC-COB akateedzana zvigadzirwa zvinosanganisa flip-chip COB tekinoroji uye AC module tekinoroji ine ShineOn yakazvimirira bhenefiti, inogona kushandiswa sechigadzirwa chikuru kusimbisa kufukidzwa kwemusika. Iyo yakaderera-frequency flash mhinduro ...
Inochinjika LED Tepi Inogara Iri Yazvino Series
Chigadzirwa Tsananguro huwandu hwenzira imwechete dimmer color palette ndeye 2000K-3000K. Izvo zvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa mumusika musika, uye simba riri pazasi pe20W. Izvo zvakatsiviwa zvakatsiga zvechinyakare kudzima mwenje mabhuru uye mwenje ye halogen. Kunyoresa 2835 ma LED ● Uniform, mutsara l ...